Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa maanta shir guddoomiyay kulan gaar ah looga hadlayay ammaanka iyo horumarinta adeegyada bulshada ee Gobolka Banaadir, iyadoo kulankan ay ka qeyb galeen Guddoomiye kuxigeenkada Gobolka Banaadir, Guddoomiyeyaasha 17-ka degmo ee Gobolka Banaadir iyo Agaasimayaasha dowladda Hoose. Kulankan oo ka dhacay Aqalka dowladda Hoose ayaa looga hadlayay arrimaha amniga, nadaafada, bilicda iyo horumarka, iyadoo si gaar ah Wasiirka ugala hadlay Mas’uuliyiinta Gobolka arrimaha adeegyada aas aasiga ee bulshada iyo sida lagama maarmaan u tahay. Ku simaha Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Maxamed Axmed Diiriye ayaa ugu horeyn uga warbixiyay Wasiirka Arrimaha Gudaha waxyaabaha u qabsoomay maamulka, dhinacyada amniga, nadaafada, bilicda iyo dhismayaasha wadooyinka. Wasiirka Arrimaha Gudaha C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa ayaa bogaadiyay guulaha uu ku tallaabsaday Maamulka gobolka iyo waxbqadka uu la yimid Guddoonka cusub, isagoo xusay in dib loo dhisay wadooyin muhiim ah, sida wadada isku xirta Sayidka iyo Bakaaraha iyo tan Buulo Xuubey. Mr Odawaa ayaa sheegay in kulankan oo ahaa mid kala war qaadasho iyo tala qaadasho, isla markaana ay tahay mid muhiim ah oo mar walba loo baahan yahay. Wasiir Odawaa ayaa sheegay in is bedel weyn uu ka jiro Gobolka Banaadir, isagoo tilmaamay kaalinta amniga ee Gobolka iyo howlihii uu qabtay tan iyo markii amniga lagu wareejiyay. | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa maanta shir guddoomiyay kulan gaar ah looga hadlayay ammaanka iyo horumarinta adeegyada bulshada ee Gobolka Banaadir, iyadoo kulankan ay ka qeyb galeen Guddoomiye kuxigeenkada Gobolka Banaadir, Guddoomiyeyaasha 17-ka degmo ee Gobolka Banaadir iyo Agaasimayaasha dowladda Hoose. Kulankan oo ka dhacay Aqalka dowladda Hoose ayaa looga hadlayay arrimaha amniga, nadaafada, bilicda iyo horumarka, iyadoo si gaar ah Wasiirka ugala hadlay Mas’uuliyiinta Gobolka arrimaha adeegyada aas aasiga ee bulshada iyo sida lagama maarmaan u tahay. Ku simaha Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Maxamed Axmed Diiriye ayaa ugu horeyn uga warbixiyay Wasiirka Arrimaha Gudaha waxyaabaha u qabsoomay maamulka, dhinacyada amniga, nadaafada, bilicda iyo dhismayaasha wadooyinka. Wasiirka Arrimaha Gudaha C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa ayaa bogaadiyay guulaha uu ku tallaabsaday Maamulka gobolka iyo waxbqadka uu la yimid Guddoonka cusub, isagoo xusay in dib loo dhisay wadooyin muhiim ah, sida wadada isku xirta Sayidka iyo Bakaaraha iyo tan Buulo Xuubey. Mr Odawaa ayaa sheegay in kulankan oo ahaa mid kala war qaadasho iyo tala qaadasho, isla markaana ay tahay mid muhiim ah oo mar walba loo baahan yahay. Wasiir Odawaa ayaa sheegay in is bedel weyn uu ka jiro Gobolka Banaadir, isagoo tilmaamay kaalinta amniga ee Gobolka iyo howlihii uu qabtay tan iyo markii amniga lagu wareejiyay.
Wararka ka imaanaya magaalada Buur-Hakaba ee Gobolka Baay ayaa sheegaya in lix nin oo ka tirsan Al-Shabaab ay isku qarxiyeen duleedka Buur-Hakaba, markii guri ay ku diyaarinayeen waxyaabaha qarxa lagu weeraray.
Ciidamada Maamulka Koofur Galbeed iyo ciidamada AMISOM oo wada socda ayaa weerar ku qaadan deegaan lagu magacaabo Raydable oo u dhaxeeya Baydhabo iyo Buur-Hakaba, waxaana ay hareereeyeen Guri lagu diyaarinayay waxyaabaha qarxa.
Guddoomiyaha Buurhakaba Maxamed Cabdi Maxamed ayaa u sheegay Warbaahinta in Ciidamada Koofur Galbeed iyo kuwa AMISOM ay isku gadaameen guri lagu diyaarinayay waxyaabaha qarxa oo ay xog ku heleen.
Waxaa uu sheegay in markii ay ka dalbadeen ciidamada inay isa soo dhiibaan ay ku gacan seyreen, isla markaana lix ka mid ah ay is qarxiyeen.
“Tuulada xalay habeenimo ah ayaa isku-weer ka qabanay, waxaa ka soo furanay hub, saddex nin waa soo qabanay, lix kale oo diiday inay is dhiibaan waa is qarxiyeen, rasaas ayayna nagu soo fureen, guriga oo dhan waa gubtay, hada madaxdooda oo go’an ayaa keennay Buur-Hakaba”ayuu yiri Guddoomiyaha degmada Buur-Hakaba.
Dhinaca kale Taliyaha Nabadsugida Koofur Galbeed Maxamed Isaaq Aflow ayaa sheegay inay ka hortageen qaraxyo Al-Shabaab ka geysan rabeen deegaanada Koofur Galbeed, isagoo xusay in deegaanka ay weerareen ay Al-Shabaab ku diyaarinayeen qaraxyo.